Kutanga unboxing uye yekutanga kuratidzwa kweApple Watch Series 3 LTE | Ndinobva mac
Kutanga unboxing uye yekutanga kuratidzwa kweApple Watch Series 3 LTE
Zvakanaka, nhasi izuva iro vazhinji vashandisi veApple vari kutora iyo nyowani iPhone 8 uye iPhone 8 Plus mushure mekutangira-kubhuka, asi isu zvakare tine yepamutemo kuvhurwa kweApple Watch Series 3 uye nyowani Apple TV 4K.
Chaizvoizvo iyo Apple Watch Series 3 inosvika kuSpain yakati decaffeinated Uye ndezvekuti sekuziva kwedu tese panguva ino isu hatina mukana wekutenga iyo inowedzera kubatanidza kweLTE. Chero zvazvingaitika, avo vari kuburitsa itsva Apple Watch, iPhone kana Apple TV, makorokoto pane izvo!
Asi kune dzimwe nyika ivo vane iyo inotarisirwa vhezheni neLTE uye ndosaka tichida kusiya yekutanga unboxing uye yekutanga kuratidzwa kwevamwe vavo. Mune ino kesi isu takasarudza vhidhiyo ye vatinoshanda navo kubva kuTechRadar.
Iyi wachi nyowani ine zvakawanda zvakanaka kuwedzera kune LTE, Kune vese avo vasina Apple Watch kana vanga vaine vhezheni yewachi iyi mushanduro yayo yekutanga, yakanaka kutenga. Zvine musoro kana iwe uine Apple Watch Series 2 haichadiwi zvakanyanya, asi zviri pachena kuti inowedzerawo zvinonakidza shanduko maererano neaya mamodheru.
Apple inotevera nzira yayo yemugwagwa uye zvinoita sekunge vane stock yakakwana kuSpain nedzimwe nyika dzema Series 3 modhi, mune iyo United States ingangove imwe yeiyo stock inotadza chimwe chinhu asi hapana chinotyisa. Kana iwe wakatenga iyi nyowani yeApple Watch Series 3, tiudze nezve chiitiko chako kuti unakirwe nacho uye kana iwe uri kumirira kusvika kwemuenzaniso pamwe nekubatana kweLTE, zvinogona kuti gare gare gore rino kana kutanga kwa2018 unogona kutozviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kutanga unboxing uye yekutanga kuratidzwa kweApple Watch Series 3 LTE
iOS 11, Apple Watch Series 3, Intel Cannon Lake mapurosesa, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac